‘रेष्ट रुम’ स्थापनाबाट छात्राको महिनावारीको तनाव अन्त्य – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. ‘रेष्ट रुम’ स्थापनाबाट छात्राको महिनावारीको तनाव अन्त्य – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
‘रेष्ट रुम’ स्थापनाबाट छात्राको महिनावारीको तनाव अन्त्य
महिनामा चार दिन तनाव व्यहोरिरहेका छात्रा ‘रेष्ट रुम ’स्थापनाले यसबाट छुटकारा पाएकी छन् । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–८ स्थित सालबन्दीस्थित जनक माध्यमिक विद्यालयका छात्राका लागि अलग्गै ‘रेष्ट रुम’ स्थापना भएपछि उनीहरु सो पीडाबाट मुक्त भएका हुन् ।
छात्रा रामकुमारी मगरले निःशुल्क प्याडलगायत आराम गर्न उपलब्ध गराइएको रुमका कारण अहिले सधै विद्यालय आउने गरेको धारणा राखिन् । यस्तै अर्का छात्रा निर्मलाकुमारी दाहालले आफूलाई परेको समस्या शिक्षिकालाई भन्न सहज भएको र कपडाको सट्टा सफा प्याडले जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको विचार व्यक्त गरिन् । नगरपालिका, दातृ संस्थाको सहयोगमा उपलब्ध औषधिलगायत प्याड छात्राको अध्ययनमा हुने बाधालाई अन्त्य गर्न वितरण गरिएको प्रधानाध्यापक तेजप्रसाद भट्टराईले बताए ।
उनले छात्रालाई आइपर्ने समस्या सहजरुपमा भन्नका लागि विद्यालयकी आयामार्फत जानकारी प्राप्त भई समाधान गर्ने कार्य गरिरहेको बताइन् । विसं २०२५ म निम्नमाध्यमिक विद्यालयको रुपमा स्थापना भई विसं २०५४ देखि माध्यमिकरुपमा सञ्चालन भएको विद्यालयमा अहिले २२८ विद्यार्थीमध्ये ११२ छात्रा अध्ययन गरिरहेका छन् । विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि १० कक्षासम्म अध्ययन हुने गरेको छ । विद्यार्थीलाई लामो अध्ययनबाट झर्को नलागोस् भन्नका लागि प्रत्येक दुई पिरियडपश्चात् १० मिनटको ब्रेकको व्यवस्था गरेको विद्यालयले जनाएको छ । यसबाट उनीहरुलाई अध्ययनमा लगनशीलता जगाउनका साथै शिक्षकलाई अध्यापनको समयमा कुनै बाधा समेत नहुने गरेको छ । विद्यालयबाट परिसरबाट विद्यार्थी वाहिर नजाउँन तथा अनुशासन कायम गर्न कक्षा सञ्चालन भएपश्चात् गेटमा ताल्चा लगाउने गरिएको छ । विद्यालयले विद्यार्थीलाई विपद्का समयमा आफू, आफ्ना परिवार र समाजलाई बचाउन व्यावहारिक शिक्षाका साथ तालीम दिने कार्यको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
विद्यालयमा यस्ता फरक क्षमता भएका विद्यार्थी कक्षा छ, पाँच, चार र दुई गरी छात्रा छ जना र छात्र चारजना गरी १० जनाले आवासीयरुपमा अध्ययन गरिरहेको प्रअ भट्टराईले जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारले फरक क्षमता भएका आवासीय विद्यार्थीका लागि प्रति विद्यार्थी रु चार हजार उपलब्ध गराउँदै आएको र सोही रकमको माध्यममाट उनीहरुले अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । विद्यार्थीका लागि प्राप्त हुने उक्त रकमबाट खानालगायत अन्य सम्पूर्ण सामानको जोहो गर्नुपर्ने भएकाले प्राप्त रकम न्यून रहेको छ । साथै सोही रकमबाट अध्यापन गराउका लागि राखिको एक शिक्षकको पारिश्रमिकसमेत भुक्तानी गर्ने गरेको प्रअ भट्टराईले बताए । फरक क्षमता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने शिक्षकलाई रु आठ हजार मात्र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरेका र यसले उनको श्रम शोषण भएको बताउँदै उनले यो हाम्रो बाध्यता नै रहेको बताए । यस सम्बन्धमा नगरपालिकालगायत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको प्रअ भट्टराईको गुनासो छ ।
यसैगरी विद्यालयको प्राङ्गणमा ‘अपाङ्गमैत्री’ शौचालयको निर्माण कार्य द्रूत गतिमा भइरहेको छ । ‘समुदायको विपद् उत्थानशीलताका लागि सुरक्षित विद्यालय परियोजना’अन्तर्गत प्लान इन्टरनेशनल र फरवार्ड नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा रु १३ लाख ७५ हजार ८३५ को लगानीमा सो शौचालयको निर्माण भइरहेको छ । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई मैत्रीशौचालय उपलब्ध नुहँदा समस्या हुने गरेको र यसले उनहरुको अध्ययनमा समेत बाधा पु¥याइरहेकाले शौचालयको निर्माणमा सहयोग गरिएको फरवार्डकी गनिता चौधरीले जानकारी दिइन् ।
उनले यही फागुन २५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा अहिले छत ढलान कार्य मात्र सम्पन्न भएको बताउँदै आउँदो चैत महिनाभित्र सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने बताए । यहाँका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनका लागि आकर्षण गर्न कक्षा तीनसम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन भइरहेको विद्यालयका शिक्षक सरोज दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
उनले प्रत्येक वर्ष अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने कक्षा थप गर्दै जाने नीति विद्यालयले लिएको बताए । उनले अङ्ग्रेजी माध्यमको कक्षा अझ व्यवस्थितरुपमा सञ्चालनका लागि थप निजी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको जानकारी दिए । दुई बिघा जग्गा क्षेत्रफलमा फैलिएको सो विद्यालयको खेलकूद मैदानलाई व्यवस्थित गर्न बजेटको अभाव रहेको छ । बजेट अभावका कारण खेलमैदान क्षेत्रमा पर्खाल लगाउन नसकिएकोे उनले बताए ।
प्रदेश नं १ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतको पहलमा विसं २०७६ मा स्थापना भएको विज्ञान प्रयोगशाला विगत छ महिनादेखि शिक्षक अभावका कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन । गत असोजमा प्रयोगशाला शिक्षकको अन्यन्त्र सुरुवा भएका कारण विद्यार्थीले उचित अध्ययन, अनुसन्धान एवं प्रयोगात्मक शिक्षा आर्जन गर्न नपाएको उल्लेखगर्दै प्रअ भट्टराईले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको बताए ।
यसैगरी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विद्यालयका चार शिक्षकलाई प्रदान गरिएको आइसिटी तालीम कम्प्युटरको अभावका कारण सदुपयोग हुन नसकेको विद्यालयले जनाएको छ । कम्प्युटर अभावका कारण शिक्षकले तालीमबाट आर्जन गरेका ज्ञानको समुचित प्रयोग हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रअ भट्टराईले विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने कम्प्युटर चाँडै नै उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रहसमेत गरे।
विद्यालयले प्राविधिक शिक्षाको आवश्यक्ता बोध गरे पनि भौतिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षककर्मीको कारण सञ्चालन गर्न नसकेकोमा प्रअ भट्टराईले दुखेसो व्यक्त गरे । उनले शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न प्राविधिक शिक्षा आवश्यक रहेको बताउँदै यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विद्यालयले दलित एवं आदिवासी छात्रालाई छात्रवृत्तिको रकम प्रत्येक वर्ष रु ४०० का दरले वितरण गरेको उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापित विद्यालयले यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई जीवनउपयोगी ज्ञान प्रदान गरी उनीहरुलाई भविष्यमा राष्ट्रको मेरुदण्डको बनाउने कार्यमा लागेकोमा स्थानीयवासी खुशी र प्रसन्न रहेका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको March 8, 2021 March 8, 2021 111 Viewed